अमेरिका पुग्ने पहिलो नेपाली डाक्टर, ४५ वर्ष अघि कसरी अमेरिका पुगे ?
पुस ८, २०७३ शुक्रवार १९:१०:०० प्रकाशित
डा. हरिहर शर्मा हाल अमेरिकास्थित न्यूयोर्कको कर्निङ सहरमा बस्छन् । उनी नेपालबाट अमेरिका जाने डाक्टरमध्ये सम्भवत पहिलो नै हुन् । सन् १९७१ मा उनी अमेरिका गएर बस्न थालेका हुन् । कर्निङको गथ्रीउ क्लिनिकमा कार्यरत उनी हालै नेपाल आएका थिए । उनीसँग स्वास्थ्य खबरपत्रिकाले गरेको कुराकानी :